Maanta iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhambaaladu ka qoreen suuqa ciyaaryahanada. | Weight Loss Drinks
Asalaamu calaykum akhristayaal maanta waa maalin Arboco ah 15ka bisha 7aad 2015ka kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee wargeysyada Ingiriiska iyo kuwa qaaradda Yurub ka qoreen suuqa kala iibsiga ciyaartoyda.
Xidiga Kooxda Man UTD Angel Di Maria ayaa qarka u saaran inuu heshiis 50 milyan ginni ah kaga tago Man United kuna biiro kooxda Paris Saint-Germain kuwaasoo u balanqaaday boos joogta ah iyo inay siinayaan mushaharka uu haatan ka qaadanayo Old Trafford ee 200 kun ginni isbuucii. (Daily Star)
Liverpool ayaa weli dooneysa weeraryahanka Aston Villa Christain Benteke laakiin ma doonayaan inay bixiyaan lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa ee 32 milyan ginni. Reds ayaa dooneysa inay qeyb ka mid ah lacagta Raheem Sterling u isticmaasho heshiiska Benteke laakiin Aston Villa ayaan ka soo dabceynin booskooda. (Daily Mirror)
Chelsea ayaa ogolaatay inay bixiso 22 milyan ginni oo lagu burburin karo qandaraaska xiddiga Barcelona ee Pedro iyagoo saxiixa xiddigaan kaga hormaraya kooxaha Arsenal iyo Liverpool, xilli tababaraha Barca Luis Enrique uu sheegay inuu fasaxayo ciyaaryahanka haddii uu doonayo inuu baxo. (Daily Star)
Haddii Chelsea ay la soo wareegto Pedro waxaa jira ciyaaryahan isna ka sii tagaya Stamford Bridge waa Juan Cuadrado kaasoo la filayo inuu ku biiro kooxda Talyaaniga ee Juventus islamarkaana uu dib ugu laabto horyaalka Serie A. (Football Italia)
Nicolas Otamendi ayaa si weyn u doonaya inuu ka tago Valencia oo uu ku biiro Manchester United, waxaana uu diyaar u yahay inuu gadood sameeyo si uu ugu qasbo Los Che inay ogolaato inay heshiis la gaarto kooxda Red Devils. (The Sun)
Kooxda Manchester United oo la fahamsan yahay inay suuqa ugu jirto weeraryahan cusub ka dib markii ay ka tageen Falcao iyo RVP ayaa ciyaartoyda ay diirada ku heyso waxaa ka mid ah xiddiga Bayern Munich Robert Lewandowski waxaana loo sheegay in qiimaha lagu heli karo xiddiga reer Poland inay tahay 35.2 milyan ginni. (Daily Telegraph)
Manchester United ayaa lagu waramayaa inay dalab cusub oo 45 milyan yuro ah inay ka gudbiyeen daafaca Real Madrid Sergio Ramos, laakiin Los Blancos ayaa dooneysa labo jibaarka lacagtaas oo ah 90 milyan yuro. (AS)
Kooxaha Ingariiska ee Liverpool iyo Tottenham ayaa ku dagaalamaya saxiixa weeraryahanka reer Spain ee kooxda Juventus Fernando Llorente. (Sky Italia)